Day: Mee 21, 2020
Lọ ọrụ ntanetị nke na-emebe atụmatụ maka weebụsaịtị kwesịrị igosipụta ọrụ ha na njirisi ụfọdụ. Ma ọ bụghị ya, ọ ga - eme ka ọrụ na - ezighi ezi yie ihe ga - eme na ọrụ ahụ agaghị arụpụta ọ bụla. [More ...]
A kọrọ na ndị ọrụ ụgbọ mmiri dị narị puku na iri ise nọ n'oké osimiri ịta ahụhụ mgbe a manyere ha ịgbatị nkwekọrịta ha ọtụtụ oge n'ihi ntiwapụ nke Corona. Dika nkpekorita nke mba nile, tupu ndi oke osimiri ebido gbawa ugwo, [More ...]
Ekpebiwo ọnọdụ ịzụta akwụkwọ ahụ site na ụlọ ọrụ nkwenye akwụkwọ TURKAK, nke ebidoworo n'okpuru nhazi nke Ministry of Culture na Tourism, ma ga-ewepụta asambodo n'ime usoro "Asambodo Asambodo Na-ahụ Maka Njem Ileanya," nke bụ otu n'ime ihe atụ mbụ n'ụwa. Turkish [More ...]
Site na nkwupụta nke Mịnịstrị nke Ọdịbendị na Ọbịa na Nleta na 20.05.2020, ekwuputala na amalitela usoro nhazi nke a na-achịkwa n'ime oke nke usoro iji gbochie mgbasa nke Coronavirus (Covid-19), ọ ga-abụkwa ọrụ na ụbọchị nke Mịnịstrị nke ime obodo kpebiri. [More ...]
Kenan Çalışkan, Onye isi oche nke Transportgbọ njem-Sen, TCDD Taşımacılık A.Ş. Ọ gara na General Manager nke Kamuran Yazıcı n'ọfịs ya ma jụọ maka nkwalite nkwalite nkwalite na mgbanwe nke isiokwu. TCDD Taşımacılık A.Ş. General [More ...]
"You Maara?" Mepụtara na imekọ ihe ọnụ na İGA ma chebe Nkpuru ahihia gị, na-achọ ime ka ndị mmadụ mata banyere mmetụta ihe mkpofu na gburugburu ebe obibi yana mkpa ọ dị maka iji mkpogharị ahịhịa. National Photography na Short Video Asọmpi kwubiri. [More ...]
Onye isi obodo nke Obodo Kayseri Memduh Büyükkılıç kwuru na ha na-aga n’ihu ọrụ ha na-ebelata okporo ụzọ ma na-abawanye nkasi obi njem njem n’enweghị ibelata. Mayor Büyükkılıç, onye na-agbaso ọrụ ndị dị na DSI Crossroad, na-agbakasị okporo ụzọ ụgbọala na okporo ụzọ Kayseri. [More ...]
Loglọ ahịa ụgbọ mmiri Mars ghọrọ ụlọ ọrụ mbụ jiri akara Marmaray maka mbupụ ụgbọ mmiri mba ofesi. Loggbọ njem ụgbọ mmiri nke International Logistics nke ụgbọ oloko site na May 15 dị ka emejuputara na Turkey dị ka Marmaray mbụ [More ...]
Onye na-ahụ maka ụgbọ njem na akụrụngwa Adil Karaismailoğlu kwuru na ogologo ụzọ okporo ụzọ Konya-Karaman dị otu narị kilomita ma kwuo, “Ihe akụrụngwa ya na nkwenkwe ụgha ya agwụla. Ọmụmụ ihe anyị maka itinye aka na-aga n’ihu. Enwere m olileanya na ebumnuche anyị bụ ịmalite azụmaahịa na njedebe nke afọ. " [More ...]
Turkcell, Türk Telekom na Vodafone na-enye 1 GB Eid al-Fitr onyinye. Site na ọdịnaya a kwadebere maka ụmụ amaala anyị na-achọ ịntanetị maka mgbasa ozi ịntanetị n'efu, oge niile nọrọ n'ụlọ [More ...]
Union of Municipality of Marmara na Kocaeli Obodo Ime Obodo Assoc. Dr. Tahir Büyükakın nyochara ọrụ ọrụ nke Gebze-Darıca Metro Line, nke e bufere na Mịnịstrị nke Transportgbọ njem na akụrụngwa, mita 52 n'okpuru ala. Ntọala nke Kocaeli [More ...]
Onye isi ala Erdoğan mere nyocha na Başakşehir Çam na Hospitallọ Ọgwụ Sakura City tupu ememme ahụ. Nata ozi site n'aka ndị isi, Erdogan, Minister nke Health Dr. Fahrettin Koca so ndị ọzọ nwere mmasị gaa. N’okwu ya n’ememe mmeghe, onye Japan [More ...]
N’ime Kiptaş Silivri 3e Stage Social Housing Project, a na-ekpebi ntụpọ otu puku na iri ise na atọ na iri ise site na nza nke Onye isi oche İBB Ekrem İmamoğlu. Ihe osise a, nke ga-eme echi site na notari, İBB na Kiptaş [More ...]
Obodo Izmir dị na Kordonboyu, nke puku kwuru puku mmadụ na-agakarị, ma n'oge anwụ. Ndị bi na Izmir nwere afọ ojuju maka ngwa a. Coronavirus na -eche ije na akụkụ nke ịkwachapụ ụzọ Izmir Obodo ukwu na Turkey [More ...]
Zihni Derin (amụrụ 1880, Muğla - ụbọchị nke ọnwụ Ọgọst 25, 1965, Ankara), onye agronomist Turkish, onye nkuzi. Mmanụ tii na Turkey butere nnabata na ịgbasa; A maara ya dị ka “nna tii”. N’afọ 1880 [More ...]
Engin Arık (14 Ọktoba 1948 - 30 Nọvemba 2007) bụ onye na - ahụ maka ihe ọmụmụ Turkey na onye bụbu prọfesọ nke Ngalaba Nyocha na Mahadum Boğaziçi. Ngwunye nke Thorium nwere ike ịbụ ihe dị ọcha na nke akụ na ụba na nsogbu nke ike. [More ...]
Mahmut Özer, Mịnịsta Mịnịsta na-ahụ maka agụmakwụkwọ nke mba, gwara akwụkwọ akụkọ banyere atụmatụ ya gbasara ọrịa R&D nke etolite na ụlọ akwụkwọ ọzụzụ aka. Özer kwuru, "Anyị ga-enwe ụlọ ọrụ R&D iri abụọ. Mpaghara ọ bụla dị iche [More ...]
Taa, Başakşehir Çam na Hospitallọ Ọgwụ Sakura City batara n'ike zuru oke na ntinye nke Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan na Prime Minista Japan Shinzo Abe. Ọ ga - enwe ike iwere 35 puku ọgwụ kwa ụbọchị yana atụmatụ 500 [More ...]